ULWANDO olukhawulezayo kwintlangano kaYehova lubangela kufuneke iiHolo zoBukumkani ezingakumbi kwiindawo ngeendawo, iiHolo zeNdibano, izakhiwo zezikolo zentlangano, iiofisi zokuguqulela kunye nezakhiwo zamasebe ezingakumbi. Ngenxa yoku, iQumrhu Elilawulayo liye laseka isebe elitsha ngo-Oktobha 2013, ukuze kuzotywe iiplani, kwakhiwe, kulungiswe yaye kunyanyekelwe izakhiwo ngendlela efanelekileyo nangeendleko eziphantsi. Eli sebe litsha libizwa ngokuba liSebe Lokwakha Nelenza Iiplani Ehlabathini Lonke yaye likwikomkhulu lehlabathi eBrooklyn, eNew York, ibe lisebenza phantsi kokhokelo lweKomiti Yokupapasha yeQumrhu Elilawulayo.
Isebe Lokwakha Nelenza Iiplani Ehlabathini Lonke longamela amaSebe Eengingqi Okwakha Nokwenza Iiplani. La masebe aseJamani, eMerika, eMzantsi Afrika naseOstreliya. Ezi ofisi zijongene nomsebenzi wokuzoba iiplani, ulwakhiwo nokulungiswa kwezakhiwo kwiingingqi zazo. Usukelo lwazo kukukhawulezisa ulwakhiwo lweeHolo zoBukumkani. Ngaphambili, umsebenzi wokwakha iiHolo zoBukumkani ubusenziwa ziiKomiti Zokwakha Zenqila okanye zisakhiwa ngendlela ezakhiwa ngayo iiHolo kumazwe angathathi ntweni. Ngoku ezi ndlela zombini ziye zahlanganiswa ukuze kukhawuleziswe umsebenzi wokwakha.
Ukuze lo msebenzi ukhulayo wolwakhiwo lweeHolo zoBukumkani nezeNdibano wenziwe kakuhle, kuye kwasekwa iSebe Lasekuhlaleni Lokwakha Nelenza Iiplani kwiofisi yesebe nganye. Lona lisebenza phantsi kweKomiti yeSebe lasekuhlaleni. Into emnandi ngalo lonke olu tshintsho kukuba zonke iiofisi zamasebe zinokucela abakhi beeHolo zentlangano abakwinkonzo yexesha elizeleyo ukuba bancedise abazalwana ekwakheni iiHolo zoBukumkani nezeNdibano.
NgoAprili 2014, ibingaphaya kwe-270 imisebenzi emikhulu yokwakha ebekufuneka yenziwe. Ibiquka iiofisi zokuguqulela eziyi-90, iiHolo zeNdibano eziyi-35 neminye imisebenzi eyi-130 yolwakhiwo kwiiofisi zamasebe. Phezu kwaleyo, kukho eminye ekufuneka yenziwe ngokungxamisekileyo yokwakha okanye yokulungisa iiHolo zoBukumkani ezingaphezulu kwe-14 000.
Kulomeleza nyani ukholo ukubona abantu bakaYehova abamanyeneyo besakha iindawo ezidumisa zize zizukise igama lakhe elingcwele ngaphandle kokuthintelwa yimida, izithethe neelwimi. UDan Molchan okwiOfisi yeKomiti Yabasebenzi kwikomkhulu lehlabathi: “Useyintaba umsebenzi ekufuneka wenziwe yaye ngexa yoku siyayidinga imithandazo yabazalwana noodade yaye iyaxatyiswa neminikelo yabo exhasa lo msebenzi. Kodwa sibaxabisa nyhani abazalwana noodade abaye bazinikela ukuze bancedise kulo msebenzi.”
UKUSUSELA NGOAPRILI 2014, IBINGAPHEZULU KWE-270 IMISEBENZI EMIKHULU EBEKUFUNEKA IGQITYIWE, NEQUKA:
IiOfisi Zokuguqulela eziyi-90
IiHolo zeNdibano eziyi-35
Imisebenzi eyi-130 yolwakhiwo kwiiofisi zamasebe
Kukho eminye ekufuneka yenziwe ngokungxamisekileyo yokwakha okanye yokulungisa iiHolo zoBukumkani ezingaphezulu kwe-14 000.
Bukela indlela amaqela amahlanu amavolontiya azakha ngayo iiHolo zoBukumkani ezimbini ngeentsuku nje eziyi-28.